पहिले जस्तो छैन दशैं : गुरुङ - Parichay Network
पहिले जस्तो छैन दशैं : गुरुङ
सन्तोष बस्याल द्वारा	 २१ आश्विन २०७६, मंगलवार ०८:०१ मा प्रकाशित
पोखरा / आज नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी । दशैंका बेला गाउँघर भरिभराउ हुनुपर्ने हो । पहिले हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । गाउँघरमा पनि दशैंको चहलपहल विस्तारै कम भएको भान हुन्छ । समय अनुसार मानिसका इच्छा चाहनामा फरकपन आएको छ । कोहि शरिया भएका छन भने धेरै त जागिर वा पढाईका शिलशिलामा विदेशिएका छन । गाउँघर शुन्य जस्तै भएको छ । यहाँ बुढाबुढी शिवाय कोहि छैनन ।
पर्वत जिल्ला पैयुँ गाउँपालिका वडा न २ का वडा अध्यक्ष भिमसेन गुरुङका अनुसार पहिले साबिकको त्रिबेणी गाविस मात्र होइन वरिपरिका सबै गाविसहरुमा दशैंको रौनक छुट्टै हुन्थ्यो । दशैंको एक महिना देखिनै तयारी हुन्थ्यो । अहिले त्यो छैन ।
‘गाउँ विस्तारै रितिदै गएको छ । युवाहरु भए दशैं पर्व दशैं जस्तो हुने हो । युवाहरुको कमीले दशैं कसरी दशैं हुन सक्छ ? हामी अल्छी भएका छौ । क्षणिकभरको खुशीका लागि कोहि विदेशिएका छौ त कोहि गाउँबाट बाहिर शहर पसेका छौ । गाउँमा विकास गर्ने युवाको जमातनै छैन भन्दा हुन्छ’ —उनले भने ।
गुरुङका अनुसार रातो टिका निधारमा, अक्षेता र आशिर्वाद लिने युवाहरुको कमीले दशैं दशैं जस्तो छैन । विस्तारै संस्कृतिमा विकृती निम्तिएको छ । संस्कृतिको सुरक्षाका लागि पुस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । यहाँ त एक पछि अर्को पुस्ता गाउँभन्दा बाहिर केन्द्रित हुदैछन । भोलीका दिनमा यसले ठुलो दुर्घटना नल्याउला भन्न सकिदैन ।
‘आज भन्दा दश वर्ष अगाडीको त्रिबेणी र आजको त्रिबेणीमा आकश पतालको फरक छ । विकास संगै विनाश पनि हुदैछ । भौतिक विकास हुनु राम्रो हो । तर संस्कृतिमानै धक्का पुग्नु उचित नहोला’— उनले भने ।
दशैंका बेला पहिले लठ्ठे पिङदेखि पिर्केपिङ सम्म बन्ने गरेको र ठाउँठाउँमा यहाँका क्लबहरुले विविध साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरि रमाइलो गर्ने गरेको उनले बताए । तर अहिले त्यस्तो छैन । युवा कल्बका नाम त छन । तर काम देखिएको छैन । कारण युवाहरुनै गाउँमा छैनन । सदस्य बिनाको संस्था के काम ? —उनले प्रशन गरे ।
उनका अनुसार संस्कृति जोगाउनका लागि सरकारी निकायबाट पहल भएको त छ । तर सबै शहर केन्द्रित छन । गाउँको संस्कृतिमा अहिलेको दुईतिहाइको सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो त्यो देखिदैन । म वडा अध्यक्षको नाताले के भन्छु भने —‘संस्कृति रहे संस्कार रहने हो । संस्कार रहे नेपालीको पहिचान रहने हो । त्यसैले हामीले हाम्रो पहिचान गुम्न नदिन गाउँका संस्कृति र हाम्रा पर्वहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
टाढाटाढा रहेका साथीभाई, आफन्त भेटी हर्षाल्लासका साथ मनाइने महान चाड विजया दशमीको सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाई, दिदिबहिनी, बुबाआमालाई हार्दिक शुभकामना । दशैं दशा होइन मिलनको पर्व बनोस् ।